IJeričevi, iNdlu yeNdalo - I-Airbnb
IJeričevi, iNdlu yeNdalo
Embindini weKras (iKarst okanye iCarso, ukuba ukhetha) kukho ilali yasePliskovica. Izitiya ezinemibala, iimbono zasendle, amachibi anoxolo kunye nezilwanyana ... uya kudibana nazo ngokukwamkela kwethu (kwifriji): iwayini yelali kunye netyuwa yethu kunye neerbs
Ikhaya lam kunye nelali zisembindini womsitho kunye nezifundo eziququzelelwe ngumbutho uJoseph: iqela labathandi bomhlaba kunye nenkampani elungileyo (kunokwenzeka ukuba iqela labantu livele egadini kodwa ungakhathazeki: bafuna ukujonga le ndawo kwaye baya kunyamalala ngomzuzwana!)
-Kukho ikhitshi elinye, kwangaxeshanye, liyindawo yokutyela kunye negumbi lokuhlala, elineoveni yeminyaka eyi-100 (ilungele ukupheka isonka kunye nepizza)
- Igumbi lokulala liyabelwana (igumbi elinye eliphindwe kabini + 1 ibhedi eyodwa + 1 yokukhupha ibhedi); emva koko, ekhitshini / kwigumbi lokuhlala, unokuba nebhedi eyongezelelweyo eguqula i-sofa ibe yibhedi
Kukho igumbi lokuhlambela elinye elincinci elineshawa, ibhidet, isitya, umatshini wokuhlamba, ibhoyila ehambisa amanzi ashushu kwindlu yonke.
Ukusuka kwibalcony, uya kufumana umbono omangalisayo wentaba iVolnik (iLanaro ngesiTaliyane) ethi, ngendlela, itsale umda phakathi kweSlovenia ne-Italiya.
-Ungasebenzisa intendelezo ebiyelwe ngeendonga zakudala zothando, umthi omdala we-walnut, umbono osingise emazantsi, intlambo kunye neNtaba yeVolnik.
- Indlu yindawo yokuhlala yeziko lethu elincinci lemfundo kunye nokukhuthaza inkcubeko yaseKarst; silungiselela iikhosi ezisebenzayo zokulima egadini kwilali, sibonelela ngezabelo zomhlaba ebantwini kwaye siququzelele utyelelo olukhokelwayo kwezona fama zibalaseleyo zaseKarst, zombini eSlovenia nase-Italiya.
4.60 · Izimvo eziyi-49
Kukho amafama amaninzi elalini, umfuyi weenyosi omnye, amagcisa amabini, ihostele entle ehlaziyiweyo inyamekela uyilo lwendawo yeminyaka engama-200 ubudala.
-Ndikhona ukuze ndikukhokele kwiifama zengingqi zasePliskovica nakwiKarst (eSlovenia naseItali). Ndinolwazi olukhethekileyo lweefama eziphilayo kunye ne-biodinamic, kwaye ndingakunika iingcebiso kunye neengcebiso zokuhamba ngeenyawo, ukukhwela ibhayisekile, izinto omawuzenze kwindawo, e-Test nase-Istria.
- (Kuphela) kanye ngenyanga, (kuphela) ngexesha lesidlo sasemini sokuphela kweveki-intendelezo kunye nekhitshi kwabelwana ngayo nabantu bezifundo zethu zokulima ... ukuba uyayithanda okanye awuyithandi le nto kwaye ufuna ukwazi ngakumbi, nje ndibhalele!
-Ndikhona ukuze ndikukhokele kwiifama zengingqi zasePliskovica nakwiKarst (eSlovenia naseItali). Ndinolwazi olukhethekileyo lweefama eziphilayo kunye ne-biodinamic, kwaye ndingakun…